HomeWararka CiyaarahaXasuuqii Liverpool u geysatay Manchester United oo Xaqiiqooyin Cusub laga Diiwaangaliyay
Maahan Wax laga Sheekeeyo wixii ku dhacay Kooxda Ugu Horyaalka badan Premier League ee Manchester United kuwaasi oo Caawa La Xasuuqay.
Waxaa Jira Xaqiiqooyin laga Diiwaangaliyay Kulanka Caawa.
Manchester United ayaa guuldarro weyn oo kaliya ku soo gaartay kulankan bishii October 1895 markaasoo Liverpool ay 7-1 ku garaacday Anfield. Waa guuldaradii ugu weyneyd ee soo gaarta kulankaan marka ay ku ciyaarayaan gurigooda.
Liverpool ayaa ah kooxdii labaad ee taariikhda horyaalka heerka koowaad ee Ingiriiska ee ku badisa kulamada bannaanka oo xiriir ah 5+ gool oo aan laga dhalin, ka dib Manchester United bishii Febraayo/Maarso 1960 ay sidaasi sameesay.
Manchester United ayaa looga badiyay Old Trafford shan gool iyo wax ka badan iyaga oo aan dhalin markii ugu horreysay tan iyo guuldarro 0-5 ah oo ay Manchester City gurigeeda kala kulantay bishii Febraayo 1955 xilligaas oo uu hoggaaminayey Matt Busby.
Liverpool ayaa dhalisay 19 gool shantii kulan ee ugu horreysay oo ay marti ahaayeen Premier League xilli ciyaareedkan. Taariikhda sare ee Ingriiska kaliya laba kooxood ayaa goolal badan dhaliyay kadib shan kulan oo ay marti ahaayeen-Manchester City 2011-12 (20) iyo Manchester United 1907-08 (20).
Manchester United ayaa lagu nasiyay 4-0 waqtigii nasashada-waa markii ugu horreysay oo ay abid afar gool ku raacdo ka dib qeybtii hore ee kulan Premier League ah.